Amin'ny 7 aogositra, ny andiany Galaxy Note 10 an'ny Samsung dia havoaka | Androidsis
Ny andiany Samsung Galaxy Note 7 dia havoaka amin'ny 10 aogositra
Anisan'ireo vaovao sy fivoahana marobe izay miseho isan'andro momba ny fandefasana finday avo lenta, ny an'ny Galaxy Note 10 sy 10 Pro Iray amin'ireo malaza indrindra izy ireo ankehitriny. Nandritra ny herinandro maromaro dia nisy fampahalalana marobe niseho izay manondro zavatra isan-karazany momba ireo fitaovana ireo, miainga amin'ny toetrany, ny mombamomba azy ary ny vidiny mety hatrany amin'ny daty fanombohan'ny terminal roa.
Amin'ity fotoana vaovao ity dia hiresaka momba izany isika, momba ny andro nananganana ofisialy an'ity duo nandrasana hatry ny ela ity, satria misy famoahana vaovao milaza fa ny 7 aogositra amin'ity taona ity ny daty marina izay handraisantsika azy ireo.
Nampandrenesina teo aloha fa ny andiany Galaxy Note 10 dia ho ofisialy amin'ny 10 Aogositra. Saingy, mandà an'ity teoria ity ireo vaovao ireo ary manamafy izany rehetra izany ny fotoana fampisehoana azy dia telo andro mialoha ny nandrasana.
Renders an'ny Samsung Galaxy Note 10
Efa CNeT ilay tompon'andraikitra tamin'ny niandohan'ity vaovao ity. Ny vavahady dia manondro izany New York dia hampiantrano ny fandefasana ireo fitaovana avo lenta amin'ny fomba fanao. Manokana indrindra, mitanisa ireo olona mahazatra ny drafitr'i Samsung, ilay hetsika unpacked hatao ao amin'ny Barclays Center, efitrano fanatanjahan-tena marobe misy any Brooklyn. Tamin'ny taon-dasa, natolotr'i Samsung ny Galaxy Note 9, ka efa ho haintsika ilay toerana.
Raha dinihina izay ananantsika hatreto dia hitantsika fa ny fika mahazatra an'ny Galaxy Note 10 dia hanana efijery AMOLED QuadHD + 6.28-inch, raha ny pro Pro kosa dia hanana tontonana AMOLED QHD +, fa misy diagonal 6.75-inch kosa. Ireo efijery roa dia hiondrika eo amin'ny sisiny. Fa, indrisy, na ny iray na ny iray, dia handefa amin'ny jack audio 3.5mm.
Ny fandikana voalohany ny Samsung Galaxy Note 10 dia voasivana
Samy andrasana ihany koa ny fampitaovana scanner an'ny fantsom-pandrefesana ultrasonika an-tsary., tonga miaraka amin'ny fanohanana ireo tambajotra 5G ary manana a Snapdragon 855 o Exynos 9825. Ny fampiasana ny chipset dia miovaova arakaraka ny tsena.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny andiany Samsung Galaxy Note 7 dia havoaka amin'ny 10 aogositra
Ahoana ny fomba hamerenana ireo fifandraisana very ao amin'ny Gmail